QM oo Qoraal Ku saabsan Xasuuqa Somalida South Africa gaarsiisay Xafiiska Madaxweynaha Dalkaasi Xilli Jey Kobsuma Beeniyay Xasuuqa – idalenews.com
Qoraal ka soo baxay Xafiiska Xog-hayaha guud ee Qaramada Midoobay Mr Ban ki Moon, ayaa waxaa la gaarsiiyay Xafiiska Madaxweynaha Dalka South Africa Mr. Jey Kobsuma kaasoo sida la sheegay ku saabsanaa waxyeelada loo geysanaayo Soomaalida ku nool Dalkaasi South Africa.
Martin Nesirky oo ah Afhayeenka Ban ki Moon oo Faahfaahin ka bixiyay xilli uu socdaal ku joogo Magaalladda New York, ayaa waxa uu sheegay in Dowladda South Africa ay u direen Qoraal ku saabsan Xasuuqa ay Muwaadiniinta Dalka South Africa u geysanayaan Ganacsatada Soomaalida ee dalkaasi noloshooda ka raadsanaaya.
‘’Qoraalka waxa uu ku saabsan yahay dhibaatada ay South Africa ku heyso Soomaalida ka soo carartay dhibaatada ka jirto Somalia, suura gal ma aha in South Africa dhowr mar lagala hadlo sidii ay u joojin laheyd dhibaatada ay Muwaadiniintooda ku hayaan Qaxootiga Soomaalida’’sidaa waxaa yiri Martin Nesirky.
Martin Nesirky, ayaa waxa uu sheegay in wax laga yaqyaqsado ay tahay in Muwaadiniinta Soomaalida six un loogu xasuuqo South Africa oo la rumeysan yahay in Somalia ay gacan weyn ka geysatay dadaaladii ay South Africa ku raadineysay Xoriyadda.
Wuxuu sheegay Afhayeenka in Ahmiyadda ugu weyn ee Qoraalka loo gudbiyay Madaxweynaha South Africa uu yahay hakinta Dhibaatooyinka ay shacbigiisa ku hayaan Qaxootiga dalkaasi ku nool, gaar ahaan Xasuuqa lagu haayo Soomaalida nabadgalyada usoo doonatay South Africa.
Haddalka iyo Qoraalka QM ee la gaarsiiyay Xafiiska Madaxweynaha Dalka South Africa, ayaa waxa uu imaanaya Xilli Madaxweynaha Dalkaasi Jey Kobsuma uu beeniyay dhibaatada lagu haayo Soomaalida South Africa joogta.
Maalin ka hor ayey aheyd markii Madaxweyne Jey Kobsuma uu beeniyay haddal kasoo yeeray Xukuumadda Somalia iyo Soomaalida South Africa oo ahaa in Xasuuq ba’an loo geysto Muwaadiniinta Soomaalida ee Dalkaasi South Africa ku nool, taasoo aysan weli ka jawaabin Dowladda Somalia.